﻿Download i-Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – isiZulu from Official Microsoft Download CenterWarning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.See how to enable scriptsDownload CenterMenuSearchSearch Download Center
e-DariIsi-AlbaniaIsi-Amharic saseIsi-ArmenianIsi-AssameseIsi-Azeri (EsiyisiLatini)IsiBasqueIsiBengali (isiNdiya)IsiBengali (saseBangladesh)IsiBhunu IsiBosnia (esiyisiCyrillic)	IsiBosnia (EsiyisiLatini)IsiCatalaIsiFilipinoisiGaliciaIsiGeorgiaIsiGujaratiIsiHausaIsi-IcelandIsi-IgboIsi-IndonesiaIsi-Inuktitut (EsiyisiLatini)IsiKannadaIsiKhmerIsiKonkaniIsiKyrgyzIsiLuxembourgIsiMacedonia (saseMakhedoniya endala)IsiMalay (saseBrunei Darussalam)IsiMalay (saseMalesia)IsiMalayalamisiMaltaIsiMāoriIsiMarathiIsiNepalIsiNgisiIsiNorway (esiyisiNynrsk)Isi-OriyaIsiPediIsiPersiaIsiPunjabiIsiQuechua (sasePeru)IsiRashiyaIsiSerbia (esiyisiCyril)IsiSinhalaIsiSwahiliIsiTamilIsiTatarIsiTeluguIsiTswana (saseNingizimu Afrika)isi-UrduIsi-Uzbek (EsiyisiLatini)IsiVietnamIsiWelshIsiXhosaIsiYorubhaIsiZuluNgokwe-IrishTurkmen (Latin) - Turkmenistan
languageinterfacepack-x86-zu-za.exe15.1 MB15.1 MB
languageinterfacepack-x64-zu-za.exe16.9 MB16.9 MB
O14LipHelp.chm207 KB207 KB
Uhlelo:1Igama Lefayela: languageinterfacepack-x86-zu-za.exelanguageinterfacepack-x64-zu-za.exeO14LipHelp.chmUsuku Ekhishwe Ngalo:27-07-2011Usayizi Wefayela: 15.1 MB16.9 MB207 KB
i-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiZulu ihlinzeka uxhumano lomsebenzisi wesiZulu:
Isofthiwe edingekayo: Nanoma iyiphi isethi noma ikhophi ezimele yodwa ye-Microsoft Office 2010 equkethe uhlelo olulodwa noma eziningi kwezilandelayo: i-Excel, i-OneNote, i-Outlook, i-Powerpoint noma i-Word.
Isikhala sediski esidingekayo: Ngaphezu kwesikhala sehadiski esisetshenziswe yizinhlelo ze-Office 2010 ezisandakufakwa, kudingeka amamigabhaythi angama-20 esikhala esikhona.
Ukufaka lo mehliso:
Yehlisa ifayela le- LanguageInterfacePack.exe ngokuqhafaza inkinobho Yokwehlisa (ngenhla) bese ulondoloza ifayela kwihadiski yakho.
Qhafaza kabili ifayela lohlelo lwe- LanguageInterfacePack.exe kwihadiski yakho ukuqalisa uhlelo Misa Kahle.
Landela imiyalelo esikrinini ukuqedela ukufaka uhlelo.
Uma selifakiwe ifayela yengifunde le-Microsoft Office 2010 Language Interface Pack yakho lingatholakala ku C:\_ProgramFiles\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE14\_LCID\_LIPread.htm
Ukubuyekeza i-Office 2007 ne-Office 2007 Language Interface Pack noma isishicilelo sokuqala se-office 2010 ne-Office 2010 language Interface Pack akusekelwe. Uma ufisa ukubuyekeza ukufakwa kokuqala kwe-Office 2010 kwi-Office ne-Office language Interface Pack kumele:
Ukhiphe ukumiswa kwe-Office 2007 Language Interface Pack
Sebenzisa i-Office 2010 bese uqoka ukhetho lokubuyekeza.
Uma ukufaka i-Office 2010 kuqedile, faka uhlelo bese umisa i-Office 2010 Language Interface Pack
Uma unenkinga yokufunda yonke iKhodi yokufaka engxoxweni "ye-Microsoft Office Activation Wizard", noma yonke ikhodi yokufaka ingakhombisi kahle lapho usebenzisa i-Microsoft® Office Language Interface Pack 2010, khansela iseluleki bese uguqukela umkhiqizo lwakho ukwenza umkhiqizo English US wakho we-Microsoft Office usebenze.
Imiyalelo okumele isetshenziswe:
Ukuguqulela uxhumano nomsebenzisi wakho we-Interface olimini lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiZulu, landela lezi zinyathelo:
Qalisa Izinketho zakho ze-Microsoft Office 2010 kwimenyu Qalisa\_Zonke Izinhlelo\_Microsoft Office\_Microsoft Office Tools .
Ngaphansi Khetha Bonisa NoSiza Izilimi, ngaphansi Bonisa ulimi khetha ulimi oludingekayo bese uqhafaza inkinobho yokuHlela Ngokumisiwe.
Ngaphansi Khetha izilimi zokuhlela, khetha ulimi oludingayo bese uqhafaza inkinobho Hlela Ngokumisiwe.
Qhafaza inkinobho u-OK.
Izimiso zolimi ozikhethile zizoqala ukusebenza ngesikhathi esizayo uma uqalisa izinhlelo ze-Office.
Qaphela: Usizo alunakuguqulelwa olimini lwe-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiZulu. Usizo luyohlala lusolimini lwakho olwafakwa ekuqaleni.Njalo misa umboniso wakho wosizo ohlwini lomehliso olimini lokuqala.
Ukususa lo mehliso:
Landela lezi zinyathelo kwi-Windows XP noma kwi-Professional Edotion:
Phuma kuzo zonke izinhlelo.
Qhafaza kabili uphawu eZinhlelweni YeNgeza noma Susa kwiPhaneli Yokulawula i-Windows.
Qhafaza Microsoft Office Language Interface Pack 2010 ebhokisini ebhokisini lezinhlelo ezifakwe manje bese uqhafaza inkinobho yokuSusa.
Landela imiyalelo esikrinini.
Landela lezi zinyathelo kwiWindows Vista noma KwiWindows 7:
Qhafaza kabili uphawu IziNhlelo Nezibaluli kwiPhaneli Yokulawula i-Windows.
Okhethweni Khipha noma Guqula uHlelo, qhafaza i-Microsoft Office Language Interface Pack 2010– isiZulu ebhokisini Lezinhlelo ezisandukufakwa bese uqoka ukhethi ukhethi Khipha.
Uma ungakwazi ukubuka okuqukethwe kwefayela le-CHM ngemva kokulilanda, ungenza izinyathelo ezilandelayo ezizokuvumela ukubuka okuqukethwe :
Vula ifolda lapho ulandele khona ifayela le-CHM.
Chofoza ngakwesokudla ku-CHM futhi kusuka kumenu evelayo, khetha Izici.
Ku-Ithebhu ejwayelekile, chofoza inkinobho yokukhulula bese uchofoze inkinobho KULUNGILE.
Chofoza kabili kufayela le-CHM bese manje uzokwazi ukubona okuqukethwe kwalo.